Iyo inoponeswa nekuda kwekudonha detector yeApple Watch Series 4 | Ndinobva mac
Zviponese pachako nekutenda kune yekudonha detector yeApple Watch Series 4
Iyi ichava imwe yeaya mashoko kuti zvinosuwisa kuti tine chokwadi chekuti tichaona kanopfuura kamwe chete munhau uye ndezvekuti dambudziko rekudonha kana zvakafanana muvanhu rakajairika. Parizvino mune iyi nyaya munhu anogara muSweden akaponesa hupenyu hwake nekuda Apple Watch Series 4 kudonha detector.
Isu hatisi kutaura nezvemunhu mukuru kure nazvo, ndezve ane makore makumi matatu nemana anonzi Gustavo Rodríguez. Mune ino kesi, mushure mekumisikidza yekudonha detector, Gustavo akangoerekana anzwa kushata nekuda kwedambudziko kumusana kwake uye, asingakwanise kuita, akawira pasi.
Ingori panguva iyoyo iyo wachi inoshanda. Kana munhu achinge ave pasi, iyo yekudonha detector inotanga kushanda uye mune iyi nyaya Apple Watch Series 4 yakaita zvayaifanira kuita. Kurova kwaGustavo kwakanangana nevhu kwakaita kuti wachi iratidze uye izvi zvakaponesa hupenyu hwejaya iri.
Rangarira kuti wachi inoita runhare rwechimbichimbi rwoga kana tisingasuduruka kubva pasi mushure meminiti, asi zvisati zvaitika hazvibvumidze kuti uzviite nemaoko kana kuzvimisa pachiratidziri. Mune ino kesi, dambudziko kumusana kwaGustavo, mugari weSweden, rakakonzera kuti awire pasi uye Yako Series 4 ichaita yekukurumidzira kufona kuti yambiro yechiitiko sezvo chisingakwanise kufamba.
Ndakatotaura pakutanga kuti haizove yekutanga yezviitiko izvo isu zvakafanana nerudzi urwu rwechiitiko zvinosuruvarisa, asi zvakanaka kuti uzive maitiro ekuita basa iri pawatch yedu kana iwe uri pasi pemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa (sezvo mune izvo zviitiko zvakagadziriswa). Saka hazvikuvadze kuti isu tine iri nyowani basa rinoshanda uye pano iwe uchaona kuti ungazviita sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zviponese pachako nekutenda kune yekudonha detector yeApple Watch Series 4
Ichi ndicho chivakwa chakasarudzika pachaitirwa Brooklyn Keynote
Snap inotangisa Snap Kamera ye macOS nekubatanidzwa muTwitch, Skype uye Youtube